Waltajjiin hariiroo naannolee ollaa Baha Ityoophiyaa cimsu Magaalaa Adaamaatti gaggeeffame – Fana Broadcasting Corporate
Waltajjiin hariiroo naannolee ollaa Baha Ityoophiyaa cimsu Magaalaa Adaamaatti gaggeeffame
Finfinnee, Sadaasa 9, 2012 (FBC) – Waltajjiin hariiroo naannolee ollaa Baha Ityoophiyaa cimsu Magaalaa Adaamaatti gaggeefame
Waltajjii kana Manni Maree Federeeshinii kan qopheese yoo ta’u, Af- yaa’iin mana marichaa aadde Keeriyaa Ibiraahimii fi Af-yaa’iin Mootummaa Naannoo Oromiyaa aadde Loomii Badhoo irratti argamaniiru.
Naannoleen maricha irratti hirmaatanis Oromiyaa, Somaalee, Affaarfi Hararidha.
Waltajjiin kunis walitti dhufeenya ummattootaa cimsuuf yaadamee kan qophaa’edha.
OBN akka gabaasetti, waltajjii kanarratti haasawa kan taasiisan Af- yaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, waltajjiin akkanaa kun qophaa’un walitti dhufeenya ummataaf iddoo olaanaa qaba jedhaniiru.
Afa yaa’iin mana maree Federeeshinii Aaddee Keeriyaa Ibraahim haasawa taasisaniin ummatni Baha Ityoophiyaa dhuudhaa waliin jireenya bara dheeraa kan qabudha jedhan.
Duudhas boonsaa kana ammoo dhaloota dhaalchisuun dirqama keessani jedhaniiru.
Waggoottan dhiyoo asitti rakkoowwan darbanii darbanii iddoo tokko tokkotti mul’ataniin waliin jireenyi hawaasaa gaaffii keessa galeera kan jedhan Aadde Keeriyaan rakkoo kana hundeerraa furuuf mootummaan hojii olaantummas seeraa kabachiisuu irratti yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon hojjechuu qaba jedhaniiru.